China Aluminium Bhora Mugadziri uye Mutengesi |Lixin
Aluminium nealuminium alloys ndiyo yechipiri yakakosha simbi muindasitiri mushure mesimbi, kunyanya inoshandiswa mundege, aerospace, indasitiri yemagetsi uye zvemazuva ese.
Indasitiri yakachena aluminium ine hunhu hwepamusoro plastiki, corrosion resistance, magetsi conductivity uye thermal conductivity.Nekuda kwehuremu huremu humiro hwealuminium, mabhora ealuminium anonyanya kushandiswa mukuvaka mota ane chekuita nekuchengetedza nzira.
Features 1-Chiedza chechiedza, yakanaka magetsi uye kupisa conductivity
2-High corrosion resistance asi simba rakaderera remagetsi
3-Yakagadzirwa zviri nyore, yakadhirowa uye yakadzvanywa
%Zvimwe (chimwe nechimwe)
Mabhora eAluminium anoratidzwa nekuora kwakanaka uye kupfeka kuramba, yakanaka kwazvo kupedzisa kwepamusoro.1xxx akateedzana alloys haana kupisa kupisa.Aya mabhora anogona kupihwa mune passivated mamiriro.5xxx akateedzana alloys anoratidza kushanda kwakanaka.
1xxx akateedzana alloys anopa zvirinani kuonda kuramba nekuda kwekuchena kwavo.Kupikisa kwakanaka pamvura dzinenge dzese dzechisikigo.5xxx akateedzana alloys ane zvirinani kurwisa makloridi uye alkaline mhinduro.Yakanaka atmospheric corrosion resistance uye inopesana nemvura yakachena, mvura yegungwa, organic acids, aldehydes.Ese aruminiyamu alloys anoiswa pasi pegomba corrosion pamberi pemakloridi.
Special bearings uye mavharuvhu, kuisa chisimbiso zvinhu (akapwanyika mabhora), indasitiri yemotokari (zvekuchengetedza zvishandiso), indasitiri yendege uye aerospace, indasitiri yemagetsi, welding maitiro.
1. Zvisingasviki 45KGS, tichatumira nekutaura.(Door to Door, Yakanaka)
2. Pakati pe45-200 KGS, tichatumira nekufambisa kwemhepo.(Inokurumidza uye yakachengeteka, asi inodhura)
3. Kupfuura 200 KGS, tichatumira negungwa.(Kuchipa uye kwakajairika)
1. TT, 50% kubhadhara mberi sedhipoziti, chiyero chisati chasvika.
2. L/C pakuona.(kubhadharisa kwebhangi kwakakwira, kwete kuratidza, asi kunogamuchirwa)
3. 100% Western Union mberi.(kunyanya kutakura mhepo kana mari shoma)
Zvinotevera: Bhora rendarira
Hollow Aluminium Balls
Seat Belt Aluminium Bhora
Shiny Aluminium Bhora
Smooth Aluminium Bhora
Solid Aluminium Balls
H65 Bhora rendarira, Bhora rendarira, Bhora resimbi, H62 Bhora rendarira, Diki Mhangura Mabhora, Pure Solid Copper Bhora,